Ny halavan'ny jiro fanavakavahana no ilaiko amin'ny fahitalavitra ahy? - Jiro MediaLight Bias Lighting
Iza amin'ny halavan'ny jiro fanavakavahana no ilaiko amin'ny fahitalavitra ahy?
Manana tabilao habe amin'ny pejin'ny vokatra rehetra izahay, saingy mbola angatahina izahay hanamafy ny habe marina impiry impiry isan'andro. Midika izany fa ny olona dia tsy maintsy tena tsy matoky tena raha mihatra amin'ny fahitalavi-dry zareo ny "lalànantsika", ary tokony hametraka ny jiro amin'ny lafiny rehetra amin'ny fampiratiana azy ireo, na amin'ny lafiny 3 fotsiny.
Ny halavan'ny MediaLight (na LX1) azonao dia miankina amin'ny tadiavinao ny jiro amin'ny lafiny 3 amin'ny fampisehoana (esory ny ambany) na ny lafiny 4. Samy mandaitra mitovy izy roa, saingy misy fotoana tianao hanesorana ny farany ambany.
Amin'ny ankapobeny, ny jiro telo no tokony apetrakao rehefa manana ireto manaraka ireto ianao:
zavatra manakatsakana - toy ny fahitalavitra amin'ny fijoroana rehefa tsy misy na aiza na aiza handalovan'ilay jiro eo ambanin'ny fahitalavitra. Ohatra iray hafa ny bara fanamafisam-peo na mpandahateny fantsona afovoany eo ambanin'ny fahitalavitra (midika mivantana fa manohina hatrany amin'ny santimetatra vitsivitsy eo ambany).
fialam-boly - toy ny korontana tariby na zavatra marobe ao ambanin'ny fahitalavitra (boaty ambony, vazy, sary voarafitra sns). Tsy hita, tsy misy saina!
fisaintsainana - Raha eo amin'ny takelaka fitaratra ny TV na eo amboniny (ao anatin'ny 4-5 santimetatra) fehezam-peo manjelatra na mpandahateny fantsona afovoany dia mety hiteraka famirapiratanana izany. Aleo esorina ny jiro.
Ny lafiny 4 no tsara indrindra raha ny TV dia eo amin'ny rindrin'ny rindrina, saingy tsy afaka diso ianao amin'ny lafiny 3. Raha tsy misy ny voalaza etsy ambony dia azonao atao ny mametraka jiro amin'ny lafiny 4. Amin'ny tranga ratsy indrindra, esory ny farany ambany.
Ankehitriny, ahoana no hamaritana ny halavany marina?
Hahita tabilao etsy ambany ianao, fa mba hahitanao hoe mandra-pahoviana no mila jiro ny jiro amin'ny lafiny 4 amin'ny fisehonao, fotsiny Raiso ny haben'ny fampirantianao 16: 9 (ny ankamaroan'ny seho dia 16: 9) amin'ny santimetatra ary zarao amin'ny 15. Manodidina ny habe lehibe kokoa manaraka.
Noho izany, boribory ary hitanao fa mila tadiny * 5 metatra * ianao.
Ho an'ny jiro 3 lafiny dia raiso ny haben'ny fampirantianao ary zarao amin'ny 23. Ahodino!
Noho izany, boribory hatramin'ny telo metatra.
Ireo tolo-kevitra ireo dia mihevitra fa ny jiro dia apetraka amin'ny 2 santimetatra tianao avy amin'ny sisin'ny fisehoana.
Ny tsanganana fahatelo ao amin'ny tabilao misy habe etsy ambany dia miteraka fikorontanana, ary eo am-piandrasana ny fampitsaharana ny tsanganana fahatelo aho noho ny fahatsorana, na dia azo atao amin'ny toe-javatra maro aza ny fahitalavitra na monitor eo amin'ny toerana mifanohitra amin'ny rindrina. .
Toerana iray tena iasan'ny fametrahana "display on a stand" dia amin'ny mpanara-maso solosaina kely indrindra hatramin'ny 32 ", na dia efa nanao fanakona-masoandro 1 metatra tamin'ny Sony 55" Sony Bravia aho ary nahafahako nametraka ambaratonga famaritana mifanohitra amin'ny jiro rindrina volondavenona.
Noho izany, ny metatra Mk2 Eclipse 1 dia mijanona ho tolo-kevitr'ireo fampisehoana solosaina na dia matetika tsy dia lava loatra ny mandeha manodidina ny sisiny 3 raha napetraka eo amin'ny sisiny. Raha manontany tena ianao hoe maninona, aza misalasala mandefa mailaka amiko. Misy antony marobe ary mety ho kely loatra amin'ny antsipiriany momba an'ity lahatsoratra ity izy ireo.
Na izany aza, araka ny hitanao, ny MediaLight Mk2 Eclipse dia matetika tsy lava handehanana manodidina ny lafiny 3 ary toa tsara izany, miaraka amin'ny manodidina ary malefaka mihitsy aza.
Ao amin'ny fametrahana "fampisehoana amin'ny fijoroana" inverted-U dia apetrantsika lavitra kokoa ny jiro avy eo amin'ny sisiny ary tsy manana halavana lava izahay handehanana manodidina ny sisin'ny 3 amin'ny fampisehoana raha toa ka teo amin'ny soso-kevitra 3 santimetatra no namorona ny sisiny.
Ohatra, angamba mametraka takelaka 2 metatra amin'ny fisehoana 65 "isika. Mba handehanana manodidina ny sisiny dia mila 2.8 metatra isika. Ka ahoana no handehanana manodidina ny sisiny 3 misy metatra 2 fotsiny? Apetratsika lavitra kokoa ny MediaLight avy amin'ny sisin'ny fampiratiana.
Misy ny olona maniry an'io satria io dia miteraka halo malalaka kokoa sy miely kokoa, izay mifanaraka amin'ny zavatra hitanao tamin'ny MediaLight Single Strip taloha kokoa (tsipika marindrano tokana eo ambadiky ny fahitalavitra), na ny taloha kokoa Ideal-Lume luminaires. Amin'ireny toe-javatra ireny dia lavitra ny sisin'ny jiro, ka ampitainao amin'ny ambaratonga avo kokoa hamirapiratra izy ireo hahafantarana ny fidinan'ny fahazavana eo afovoan'ny fahitalavitra. Eritrereto ny fahitana ny hazavana manjavozavo arakaraka ny ahatongavanao eo afovoan'ny taratra. Raha foibe maty io, dia mety hisy ny fandavoana alohan'ny hahatongavany amin'ny sisiny.
Ny olona sasany koa dia tia an'io fomba io satria mety ho kely lavitra ny vidiny. Ankehitriny rehefa manolotra safidy ambany kokoa izahay, LX1, ary ny fahasamihafana eo amin'ny 1m sy 2m dia $ 5 fotsiny raha oharina amin'ny $ 20, tsapako fa tsy dia manampy loatra ity fomba ity.
Ary koa, ny LX1 dia tsy misy tadiny extension .5m, noho izany dia misy toe-javatra sasany mety tsy ahafahanao mametaka tsipika fohy kokoa amin'ny port USB an'ny TV (mety tsy hahatratra ny sisin'ny fahitalavitra izay misy ny ankamaroany, fa tsy rehetra, napetrak'ireo mpanamboatra ny USB).
Raha eo anelanelan'ny habe ianao dia mety afaka mampiasa tsipika kely kokoa. 3.11 dia eo anelanelan'ny 3 sy 4. 3.33 dia tsy. Rehefa misy fisalasalana dia ataovy boribory satria afaka manapaka ny MediaLight na LX1 be loatra foana ianao.
Ho an'ny * mpanara-maso solosaina tsy eo amin'ny rindrin'ny rindrina *, afaka mampiasa tsipika 1 metatra ianao. Mampiseho anao ny endrik'izany ny tabilao.
** Indraindray ny fahitalavitra dia manana "hump" tononina ambany. Izany dia mahazatra amin'ny fisehoana OLED manify be dia be hampiantranoana ireo fitaovana elektronika sy mpandahateny. Mbola afaka mandeha jiro eo ambany ihany ianao, raha tsy mikasika ny rindrina ny jiro. Raha ny tokony ho izy dia 1-2 eo ho eo miala amin'ny rindrina no tadiavinao. Ny ambany matevina dia tsy hiseho ho mamiratra ary ny "halo" dia tery kokoa any ambany, nefa tsy dia ratsy.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba ny fametrahana jiro amin'ireo humps ireo izahay fametrahana page.
Previous lahatsoratra Miresaka momba ny jiro fitongilanana ao amin'ny fantsona Murideo
Next lahatsoratra Moa ve ny biriky na loko miloko "manimba" jiro mitongilana marina?